Hoogganoonni DhDUO fi hojjattoonni mootummaa Finfinnee jiraatan ijoollee isaanii manniin barnoota Gen. Taaddasaa fi Gen. Waaqootti erguun ummataaf fakkeenya gaarii ta’uu qabu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Saayinsii Barnoota Hoogganoonni DhDUO fi hojjattoonni mootummaa Finfinnee jiraatan ijoollee isaanii manniin barnoota Gen....
Hoogganoonni DhDUO fi hojjattoonni mootummaa Finfinnee jiraatan ijoollee isaanii manniin barnoota Gen. Taaddasaa fi Gen. Waaqootti erguun ummataaf fakkeenya gaarii ta’uu qabu
Manniin barnootaa barnoota Afaan Oromoon laatan Finfinnee keessatti eebbifamuun isaanii oduu gammachiisaadha. Waan hedduu nama abdachiisuu fi nama jajjabeessuudha. Akkuma hoogganoonni DhDUO jedhan, xiqqqaattus, tankaarfiim seenaa Oormoo deebisanii magalaa Finfinnee keessatti gadi dhaabuuti.
Manniin barnootaa maqaa Gen. Taaddasaa Birruu fi Gen. Waaqoo Guutuun moggaafaman kunniin banamuun Oromoof madda boonaa ta’eera. Manniin barnootaa kunniin Finfinnee keessatti banamuun osoo hin hanqatin maqaa gootota sirna Haylasillaasee irratti fincilaniin moggaafamuun isaanii aduwwii Oromoo mataa lafa laalchisuun isaa ifa. Yeroo isaan Oromoon Afaan Amaaraa akka baratuuf sadarkaa mootummaa federaalaatti dhiibu eegalan kanatti kun ta’uun isaaniif madda bowwooti. Manniin barnootaa kunniin akka hin ijaaramne dhaabuu dadhabansi mana cufatanii kufaatii isaaf hawwuu fi ololaanis yoo ta’e akka manniin barnootaa kunniin bu’aa yaadameef hin argamsiisne godhuun isaanii hin hafu.
Qabsoon kana boodaa Oromoo eeggatu, manniin barnootaa kana firii qabeessa godhuun, hujii gamoo ijaaruu caala ulfaatuu mala. Qormaanni jalqabaa barattoota baay’inaan hawachuudha. Kana dhugoomsuu irratti waa’een qulqullina barnoota manniin barnoota kana keessatti kennamuu bakka guddaa qabaachuuf deema. Ammas, hoogganoonni gamoo eebbisanii fi dhagaa bu’uuraa kaayanii biraa deemuun sirri hin ta’u. Kan barbaadamu haala ijoolleen heddu gara manniin barnootaa kanatti ittiin dhufan mijeessuu fi Oromoota magaalaa Finfinnee keessa jiraatan jajjabeessuudha. Kana dhugoomsuudhaaf fakkeenya gaarii ta’anii mul’achuun dirqama. Kun kan ta’u yoo hoogganoonni OPDO, hojjattoonni mootummaa fi namoonni bebbeekamoon magaalaa Finfinnee keessa jiraatan ijoollee isaanii gara manniin barnoota kanaatti geessaniidha. Fakkeenya gaarii ta’uudhaan carraa manniin barnootaa 4 amma eebbifaman woggoottan muraasa dhufan keessatti gara 40’tti olguddisuu uumuu qabu. Manniin barnootaa ijaaranii biraa deemuun kaayyoo qabame bakkaan gayuu dhabuu mala.
Previous articleManni Murtii Federaalaa dhimma Ob. Baqqalaa Garbaa fa’a irratti murtii dabarse
Next articleOromoo shirri labsii hatattamaa fi seerri farra-shoroorkeessummaa dadhabe dilaalli (gibirri) harka hin kennisiisu